Inona avy ireo fomba mety hahazoana rohy avo lenta PR dofollow?
Ity lahatsoratra ity dia natao manokana ho an'ireo izay liana amin'ny fananganana backlinks PR ho an'ny tranokalany. Ireo tompon'ity tranonkala izay manomboka mampivelatra ny orinasa an-tserasera amin'ny ankapobeny dia matetika mifandray amin'ny fomba fananganana rohy tahaka ny fanoratana lahatahiry, tambajotra tsy miankina, fametrahana hafatra,. Ireo loharanon-kevitra ireo, tsy isalasalana, dia hanampy anao handefa rohy mankany amin'ny tranokalanao.
Ankehitriny, ny fanamboarana rohy amin'ny alalan'ny famoahana sy fanehoan-kevitra avy amin'ny vahiny dia mety ho sarotra ihany koa satria ny ankamaroan'ireo loharanon-kevitra ireo dia mampihatra ireo famantarana nofolowika amin'ny rohy mankany anaty izay tsy mandray anjara amin'ny fikarohana.
Hodinihina ato amin'ity lahatsoratra ity ny fahasamihafana misy eo amin'ny teknolojia fanorenana nofolow sy dofollow ary ny fomba ahafahan'izy ireo manome ny ezaka SEO anao. Ankoatra izay, hiresaka momba ny lanjan'ny rindran-kira PR sy ny fitaoman-dry zareo eo amin'ny sehatry ny tranonkala.
Ny tombony amin'ny backlinks dofollow
Ny backlinks Dofollow no hany karazana rohy miditra izay manan-danja indrindra ho an'ny laharana ambony amin'ny valin'ny fikarohana. High back dots an'ny dofollow manampy ny manatsara ny sehatry ny domain domain, PageRank ary manatsara ny fanentanana ny marika eo amin'ny mpanjifa mety.
Misy zavatra iray tokony hodinihinao rehefa manangana ny rohy fananganana rohy ianao dia ny tokony hamokanao dofollow sy nofolow backlinks any amin'ny tranokalanao, satria raha manana dofollow fotsiny ianao, dia mandefa famantarana diso amin'ny fikarohana milina ary mety Hamafiso ny loharano Internet.
Loharano ahafahana mivezivezy amina lahatsoratry ny dofollow PR: 1)
YouTube dia sehatra media lehibe izay an'ny Google. Isan'andro dia olona an-tapitrisany no mampiasa YouTube noho ny tanjon'izy ireo, ary mitombo hatrany io isa io. Azonao ampidirina amin'ny rohy ao amin'ny kaontinao YouTube ny rohinao, fa ny rohy dia ho nofolo na tsia.
Azonao atao ny manaraka ny dingan-dofollo amin'ny YouTube, azonao atao ireto:
Midira ao amin'ny YouTube amin'ny kaonty Google anao;
Sokafy ny fizarana "Advanced Channel Settings" ary hahita ny "Associated Website";
Ampidiro ao amin'ny "Associated Website" ny tranokalanao. "
Izany no izy. Ankehitriny dia manana rohy PR ianao avy amin'ny iray amin'ireo sehatra media lehibe indrindra eran-tany.
Fomba iray hafa ahafahana mivezivezy amin'ny adiresy PR avy amin'ny loharanom-baovao iray dia ny fampiasana Google+. Ity tranonkala media sosialy ity dia heverina ho iray amin'ireo sehatra malaza indrindra noforonin'i Google. Noho izany dia toerana tsara indrindra hampandrosoana lahatsoratra sy lahatsoratra izay ahafahanao mahazo jiro lehibe sy tsara amin'ny tranokalanao.
Mba hahazoana bakalorea avo lenta ambony avy amin'ny Google+, mila manaraka ireto dingana manaraka ireto ianao:
Abonnement amin'ny Google+ ary mamorona ny kaontinao any;
Mandehana any amin'ny "Profil" ary tsindrio ny bokotra "About";
Ampio ny blôginao URL ao amin'ny fizarana "Links";
Izany no izy. Ankehitriny, manana tranonkala fanamafisana avy amin'ny Google+ ianao ao amin'ny tranonkalanao.
WordPress. com dia sehatra fitorahana bilaogy maimaimpoana izay ahafahanao manangana tranokala sy bilaogy tsy misy sandany. Iray tombontsoa fanampiny amin'ity sehatra ity dia ny hahafahanao mamaky mora foana ny rakitra dofollow sy nofollow amin'ny WordPress.
Mba hahazoana rohy avoakan'ny PR avy amin'ny WordPress, mila mamorona blôgy maimaim-poana ianao ao amin'ity sehatra ity ary mametaka lahatsoratra hikaroka momba ny hatsarana momba izany. Avy eo dia ampifandraiso ny URL-nao lehibe indrindra mba hahazoana rindran-damina avo lenta avy amin'ity sehatra malalaka malalaka ity. Izay ihany no tokony hataonao mba ahafahanao mahazo siramamy tsara amin'ny serivisy toy ny WordPress Source .